Ciidamada Puntland iyo Galmudug oo howlgal amni oo wadajir ah ka bilaabay Gaalkacyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandCiidamada Puntland iyo Galmudug oo howlgal amni oo wadajir ah ka bilaabay Gaalkacyo
June 8, 2020 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Gaalkacyo. [Sawir Hore]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Ciidamada Puntland iyo Galmudug ayaa gudaha magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ka bilaabay howlgal lagu xaqiijinayo amniga magaalada.
Howlgalka wadajirka ah ayaa bilaabmay habeenimadii xalay, sida ilo-wareedyo haayadaha ammaanka katirsan ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror.
Xubno looga shaki qabo in ay xiriir la leeyihiin maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu soo qabtay howlgalka, sida ilo-wareedyadu sheegeen.
Sabtidii, ciidamada difaaca Puntland ee PSF iyo guutada 21-aad ee ciidanka Danab ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa toogasho ku dilay madaxii qaraxyada Al-Shabaab ee gobolka Mudug.
Labada maamul ayaa shir ay ku yeesheen Gaalkacyo bishii la soo dhaafay isku afgartay in si wadajir ah looga shaqeeyo ammaanka Gaalkacyo iyo gobolka oo dhan.